मेरो मनमा खेलिरहेका प्रश्नहरू अर्कै छन् ! • Makalu Khabar
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला बालीमा छन् । त्यहींबाट उनले नेपाल र बाँकी विश्वको तुलना गर्दै नेपाल कसरी समृद्ध हुनसक्छ भन्ने चिन्तन्मनन् गरेका छन् । भट्टराईले २४ गते ‘मानवीय वार्तामा सरकार र सुरक्षाबलको दृष्टिकोण’ (गभरमेन्ट एण्ड सेक्युरिटी फोर्स पर्सपेक्टिभ्स अन ह्युमेनिटेरिएन नेगोसियसन) विषयमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
भट्टराई फागुन २६ गते मलेसिया जानेछन् । त्यहाँ उनले मलेसियाको विकाससम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गर्नेछन्, र त्यहाँका नेपालीहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गर्नेछन् । डा. भट्टराई फागुन २७ गते अपरान्ह स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोही क्रममा बालीमा पुगेर उनले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका छन् ।
एउटा मध्ययुगीन गाउँको गोठालोबाट देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको मान्छे ६४ बर्षको उमेरमा सबैथोक त्यागेर किन भौंतारिएको होला ? के ऊ बौलाएकै हो? कि ऊ अमुक शक्तिको गोटी बनेर देश र जनतालाई धोका दिन उद्यत भएको हो ? वा ऊ आफ्ना समकालीन राजनीतिक नेताहरू ओली, प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्र, महन्त, गच्छदार, कमलहरूसंग सत्ता-शक्तिको खेलमा पराजित भए पछि नक्कली साधुको भेषमा जनतालाई ठग्न निस्केको हो ? आदि आदि प्रश्नहरू व्यक्त अव्यक्त रूपमा उठ्न सक्छन्।
यी प्रश्नहरूको जवाफ कुनै दिन इतिहासले मात्र दिनसक्ने भएकाले अहिले म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। आखिर इतिहासको फैसला सबैले एकदिन दिन करैलाग्छ ! म त्यसमा विश्वास गर्छु।
पहिलो, विश्वस्तरबाट हेर्दा एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकसम्म आइपुग्दा मानव जाति अभूतपूर्व विकास र भयंकर विनाशको दोसाँधमा उभिएको प्रष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ। एकातिर आर्थिक-भौतिक विकास तथा विज्ञानप्रविधिको अकल्पनीय विकास-विस्तार र अर्कोतिर मानव मानव बीचको असमानताको खाडलको भयंकर विस्तार दुसाध्य अन्तरविरोध र संकटको रूपमा पाक्दै गैरहेको छ। त्यसैको राजनीतिक अभिव्यक्तिको रूपमा अमेरिकामा ट्रम्प, चीनमा सी जिनपिंग, रूसमा पुटीन, भारतमा मोदी, नेपालमा ओलीहरूको अवतार भैरहेको छ। सबैले आआफ्नो देशलाई ‘ग्रेट’ ( महान् ) बनाउने सपना बाँडिरहेछन् !
यसैकानिम्ति हामीले ५ स को अवधारणा अघि सारेका हौं। ती सबै एक अर्कासंग अन्तर्सम्बन्धित छन्।तीमध्ये ‘समुन्नत समाजवाद’ अन्तिम लक्ष्य वा साध्य वा गन्तव्य हो।’समतामूलक समृद्धि’ त्यहाँसम्म पुग्ने मार्ग वा विधि हो। अरू तीन अर्थात् ‘समावेसी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र’, ‘ सुशासन/सदाचार’ र ‘स्वाधीनता/सार्वभौमिकता’ समृद्धि प्राप्त गर्ने र समुन्नत समाजवादमा पुग्ने आधार वा माध्यम हुन् !
हामी नयाँ चरणको समतामूलक समृद्धिको बाटो हुँदै समुन्नत समाजवाद तर्फको लामो यात्रामा लामबद्ध भएकाहरू Pilgrim’s Progress मा झैं कदम कदम गर्दै अघि बढ्दैछौं ! निरन्तर अघि बढिरहनेछौं।